कम्युनिष्ट मन्त्रीको सम्पत्तिमा दम्पती विवरण !::KhojOnline.com
-मिलन तिमल्सिना ,व्यंग्य
हुन त उनी आफू आफै पनि आफ्नोको मात्र मान्छे होइन । घरपरिवार, समाज र देशभरका सबैको मान्छे । जन्मजातै कम्युनिष्ट । दुःखी, गरिब र सर्वहाराको मान्छे । दुःखीको दुःख र गरिबको गरिबी हटाउने संकल्प । धनसम्पत्ति, सुखसयल, मोजमस्तीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भन्ने आदर्श ।
कहिले झुपडीमा बसेर रात कटाए । कहिले नुन र ढिंडो मात्रै खाएर छाक टारे । जेलनेल, जंगल बुट्यान, भीर पखेरा, काँडा झाडी, खेतबारी, उकालीओराली गरेर जिन्दगीमा धेरै दुःख झेले । ज्यानलाई हत्केलामा राखेर धेरैपटक दौडिए । प्रहरीसँग झेल गरेर भागे । झेल गर्दागर्दै जेल परेपछि जेल तोडेर पनि भागे । खाली खुट्टै हिँडे । ठेस लागेर लडे । धेरैपटक मर्नै आँटेर पनि बल्लतल्ल बाँचे । आफ्नो विगत सम्झँदा उनी आफैंलाई पनि अहिले अचम्म लाग्छ ।
हेर्दाहेर्दै समय फेरियो । समयसँगै उनको जिन्दगीले पनि कोल्टो फेर्यो । सजिलै के पुग्न र पाउन सकिएला र भनेर पहिले नपत्याएको ठाउँमा अहिले पुगेर र पाएरै छाडे । जहाँ पुग्छु भन्ने लक्ष्य थियो, त्यहीँ पुगे । ठाउँमा पुगेपछि पुराना दुःखपीर बिर्सने रैछ । त्यसमाथि सबै पुराना कुरा सम्झेर पनि साध्ये लाग्दैन । समयअनुसार चल्न जान्नुपर्छ । समयअनुसार फेरिन सक्नुपर्छ । नत्र पछि परिन्छ । यो ध्रुवसत्य कुरा उनको जीवनमा पनि लागू नहुने कुरै भएन ।
उनी समाज बदल्न भनेरै राजनीतिमा लागेका हुन् । तर आफू नबदलिंदासम्म समाज बदल्न नसकिने रैछ । माक्र्स, लेनिन, माओसँगै अरु धुरन्धर दार्शनिक र विद्वानहरु पनि यो कुरामा सहमत छन् कि समाजलाई परिवर्तन गर्नुअघि पहिले आफू परिवर्तन हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले आफू बदलिनुपर्छ ।
समाजमा उन्नति गर्नुअघि आफ्नो प्रगति हुनुपर्छ । समाजका मान्छे सुखी हुनुअघि पहिले आफू सुखी हुनुपर्छ । समाजलाई समृद्ध गर्नुअघि आफू र आफ्नो परिवार, आफन्तलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ । परिवर्तन आफूबाट गर्नुपर्छ । यही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै उनी अघि बढे ।
परिवर्तन आफूबाटै गर्नुपर्छ भन्ने संकल्प बोकेर हिँड्दा सफल पनि होइने रैछ । पहिले तिउनमा नुन पुर्याउन धौधौ थियो, अहिले घरमा सुन थन्क्याउन धौधौ हुन थाल्यो । पहिले गाउँमा समेत घर नभएर चिन्ता थियो, अहिले शहरमै घर थपिएर चिन्ता छ । पहिले पैसा नहुँदा दुःख थियो, अहिले पैसा धेरै हुँदा दुःख छ । पहिले जंगलमा खाली खुट्टा हिँड्दा गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले चिल्लो कारमा झण्डा हल्लाउँदै हिँड्दा पो गाह्रो छ । पहिले डन्डावालासँग लुकामारी खेल्दै भाग्दा झण्झट हुन्थ्यो, अहिले डन्डावालालाई सुटकेश बोकाएर हिँड्दा झण्झट हुन्छ ।
नहुँदा त छैन भनेर छाती फुलाएर हिँड्दा शीर ठाडो हुन्थ्यो नि । अहिले मसँग यति छ भनेर फूर्ति गरेर धनसम्पत्ति देखाउँदा शीर गिर्ने रहेछ । पहिले उनको शीर ठाडो थियो । अहिले गिर्न थालेको छ । तर निहुरिएको शीर अझै ठाडै छ भन्ने उनलाई लागेको छ । किनकी उनको भित्री मनले नमानेपनि देखाउने बाहिरी मुखले भन्छ–उनीसँग भएका कुनैपनि धनसम्पत्ति उनका होइनन् । श्रीमती वा श्रीमान्का हुन् । ठेट शब्दमा दम्पतीका सम्पत्ति !
हेर्दाहैर्दै आफ्नो हुन आइपुगेका उनका यी सबै धनसम्पत्ति अर्कैका हुन् । टाउकोमा लगाएको टोपी अर्कैको । कालो कोट, दौरा सुरुवाल, जुत्तामोजा सबै अर्कैको । ज्यान नै अर्कैको ।
राजनीति गरेको आफ्नो लागि होइन नि ! देश र नागरिकको लागि हो । देश र नागरिकको लागि काम गरेपछि ज्यान आफ्नो मात्र भन्न कहाँ पाइयो र ! विवाह अघिसम्म ज्यान सबैको साझा थियो । तर बिहेपछिज्यान थोरै निजी पनि हुन थाल्यो ।
पहिले देश र नागरिकको लागि मात्र भएको ज्यान अब श्रीमती, छोराछोरी र आफन्तका पनि भयो । ज्यानसँगै जोडिएका धनसम्पत्ति उनीहरुकै हुन् । त्यसमा पनि पहिलो हक श्रीमतीको लाग्छ । त्यसैले उनको आफ्नो भनिएका सबै धनसम्पत्ति श्रीमतीका हुन् । श्रीमतीलाई पुगेपछि छोराछोरी, परिवार, आफन्त, नातेदार अनि देश र नागरिकको लागि पालो आउँछ । देश र नागरिकका लागि त मरिमेटेर काम गर्दैछन् नि उनले !
कम्युनिष्ट पार्टीको नीतिमा सबै बराबर । धनसम्पत्ति र सुन दिने अरुका बाआमा पनि आफ्नो र श्रीमतीका बाआमा जस्तै हुन् । त्यसैले उनको नाममा भैपरी थुप्रिएका सुनचाँदी, हिरामोती श्रीमतीका दाइजो र पेवा हुन् ।
त्यसमाथि कम्युनिष्ट नीतिमा श्रीमतीलाई आफ्नो हैसियतभन्दा माथि राख्नु त झन् बढी प्रगतिशील कदम । आफूभन्दा श्रीमती धनी हुनु गर्वको कुरा । श्रीमती धनी भएपछि छोराछोरी, परिवारका अरु सदस्य, आफन्त धनी हुन्छन् । त्यसपछि अरुको पालो आउँछ । यति जाबो कुरा बुझ्न नसक्नेहरुले मात्र उनको आलोचना गरेका हुन् ।
अर्को कुरा कम्युनिष्ट भनेर कन्नुभन्दा कमाउनिष्ट, कमनिष्ट या कमनिष्ठा भन्नु कता कता सजिलो हुन्छ । कमाउनिष्टमा कमाउ जोडिएको छ । कमनिष्टमा मनि या पैसा झुण्डिएको छ । कमनिष्ठाले निष्ठा कम भएको अर्थ बोकेको छ । तर मनि कहि छुट्दैन । त्यसैले पैसाले पनि साथ छाड्ने कुरा भएन ।
त्यसैले महान तथा गौरवशाली पार्टीका उनी कार्यकर्ता आफूलाई शुद्ध कम्युनिष्ट भन्दा कमाउनिष्ट, कमनिष्ट र कमनिष्ठाकै सजिलो व्यवहार देखाउन मन पराउँछन् । दुनियाँले नपत्याएपनि नाम कम्युनिष्ट ! काम कमाउनिष्ट !
त्यसमाथि कम्युनिष्टका पछिल्तिर झुण्डिएको पुच्छर फ्याँकेर भर्खरभर्खर विकसित हुन लागेको स्वरुप । देशभर कम्युनिष्ट लहर ल्याएर देशलाई कायापलट पार्छौं भन्दै चुनाव जितेर सरकार चलाएको बेला छ । देश र समाज बदल्ने अठोट छ । पहिले आफू र आफ्ना परिवार बदलिए पो देश र समाज बदलिन्छ ! उनी यही बाटोमा हिँड्दैछन् ।
जुन बाटोमा आफू हिँडेको हो, त्यही भन्दैछन् । धनसम्पत्ति जसको हो, त्यही सुनाउँदैछन् । सबैलाई सुखी बनाउने लक्ष्यमा अघि बढेको उनको पाइला सही छ ।
धनसम्पत्तिको विवरण सुनेर मान्छेले जिब्रो त टोके । सुनचाँदीका खजना, बंगाला, मोटरगाडीको कुरा सुन्दा कोही कोही त झण्डै बेहोस भएर पनि ढले होलान् !
तर यी सबै त उनका हैन पो रैछन् ! श्रीमान मन्त्रीका धनसम्पत्ति श्रीमतीका, श्रीमती मन्त्रीका धनसम्पत्ति श्रीमानका । सम्पत्तिको सट्टा दम्पती विवरण पो रैछ । कुरो बुझेपछि बल्ल कुरा काट्नेले चित्त बुझाउँदै होलान् ।